के भयो त आज दार्जीलिङमा? (फोटो फिचरसहित) – खबरम्यागजिन
HomeBreaking Newsके भयो त आज दार्जीलिङमा? (फोटो फिचरसहित)
September 24, 2017 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि Breaking News, दार्जीलिङ, मुख्य समाचार 0
दार्जीलिङः दार्जीलिङकी जिल्लापाल जोयशी दासगुप्त, पुलिस प्रशासनका साथै दार्जीलिङ शहर खुल्ला बनाउने समर्थकहरुको कठोर परिश्रमपछि पनि आज दार्जीलिङ शहर खोलिएको थिएन। तर पुलिसको कठोर चापको कारण आज लगभग 12.30 बजीदेखि चौकबजारका लगभग 40 प्रतिशत दोकानहरु खोलियो। हिजो दार्जीलिङ पथ पसले संघको तत्परतामा यहाँको नृपेन्द्र नारायण हिन्दु हलमा एक बैठक गरिएको थियो अनि आज बिहान9बजीदेखिनै शहरका सम्पूर्ण दोकानहरु खोल्ने सहमति भएको थियो।
तर आज बिहान 9.30 बजीसम्म पनि शहरको एउटै पनि दोकान खोलिन नसकेपछि बन्द खोल्ने समर्थकहरु शहरमा ओर्लिएर दोकानहरु खुल्ला गर्ने अपील गरे। तर बन्द खोलिएन, उल्टा दार्जीलिङ शहरका केही फूटपाथमा बसेका दोकानदारहरू पनि आ-आफ्नो सामानको कुम्लो बनाएर चम्पट कसे।
यसपछि दार्जीलिङकी जिल्लापाल जोयशी दासगुप्त पनि मैदानमा आइन् अनि उनले पनि दोकानदारहरुलाई आ-आफ्नो दोकान खोल्ने अपील गरिन्। उनले भनिन्-दोकान तपाईंहरुको हो, परिवार तपाईंहरुको हो, दोकान खोल्ने निर्णय तपाईंहरु आफैले लिनुपर्छ। एउटा पोस्टर टाँस्दानै डराउने कुनै काम छैन। यस्तो कागजको टुक्रासित डराउनु हुँदैन। जति जलाउनु थियो, जलाइसक्यो, भत्काउने भत्काइसक्यो। नानीहरुको भविष्य पनि जलाइसक्यो। अब किन डराउनु?
उनले यस्तै अपील गरिन्, तरै पनि शहरको एउटै पनि दोकानदार आफ्नो दोकान खोल्न अघि आएन। यसपछि पुलिसले माइकिङनै गर्न शुरू गऱ्यो। पुलिसले पनि दोकानहरु खोल्ने कठोर प्रयास गऱ्यो, तर दोकान खोल्न नसकेपछि पुलिसले चौकबजारका दुइवटा फल दोकानको तालानै तोड़ेको पनि आरोप उठेको छ।
यसअघि पुलिसले दोकान नखोले दोकानहरुको ताला तोड़िदिने चेताउनी पनि दिएको थियो, यस्तो चेताउनी दिंदासम्म दोकान नखोलिएपछि पुलिसकर्मीहरुले दुइवटा दोकानको तालानै तोड़ेका थिए। हिजो दार्जीलिङको पथ पसले संघको तत्परतामा एक आपतकालीन बैठकको आयोजना गरिएको थियो, जुन बैठकमा दार्जीलिङका व्यवसायीहरुको लगभग 20 वटा संगठनका प्रतिनिधि सामेल भएका थिए, जसमा मोबाइल डिलर एसोसिएशन, हार्डवेयर एसोसिएशन, पान भण्डार, मिष्टान भण्डार, लुगा व्यवसायी, मारवाड़ी युवा मन्च, भोजपुरी युवा मन्च, दार्जीलिङ च्याम्बर अफ् कमर्सका प्रतिनिधिहरु उपस्थित थिए।
जसमा एक महिला व्यवसायीले आजदेखि दार्जीलिङका सम्पूर्ण दोकानहरु खुल्ला राख्नुपर्ने अपील गर्दै बन्द गर्न आउनेहरुको हात-खुट्टानै भाँच्नुपर्छ भन्ने चेताउनी दिएकी थिइन्। बन्दको विरोधमा उनको यस्तो जोशपूर्ण वक्तव्य सुनेपछि उपस्थित व्यवसायीवर्गले गतिलैसित थप्पड़ी मारेर स्वागत जनाएका थिए अनि अधिकांश दोकानदाहरुले पनि यसमा सहमति जनाउँदै आज बिहान9बजीदेखि शहरका सम्पूर्ण दोकानहरु खुल्ला गर्ने निर्णय गरेका थिए।
तर आज एकाबिहानै यहाँको लेबोङमा सिलगढी जान लागेको एउटा स्पेशियो गाड़ी जलाएर राख बनाइएको, अर्का दुइवटा गाड़ी पनि तोड़फोड़ गरिएको खबर फैलिनसाथ दार्जीलिङ शहर खोलिने सम्भावना क्षीण बनेर गएको थियो। आज बिहान लगभग5बजीतिर लेबोङ गोलाईमानै सिलगढी गइरहेको स्पेशियो गाड़ीमा आगो लगाएर जलाइएको थियो। यद्धपि, यो गाड़ीमा कसले आगो लगायो भन्ने स्पष्ट नभए पनि यसको आरोप सोझै गोजमुमोका बन्द समर्थकहरुमाथि लागेको छ।
यस घट्नामा लिप्त कसैलाई अझैसम्म पुलिसले पक्राउ गर्न सकेको छैन। यस घट्नापछिनै दार्जीलिङ शहरका व्यवसायीवर्ग डराएर दोकान खोल्न नचाहेको स्पष्ट भएको थियो। शहरका दोकानहरु मध्यान्ह 12 बजीसम्म पनि खुल्न नसकेपछि पुलिसले दोकानदाहरुमाथि गतिलै चाप दिने कार्य गऱ्यो। जसको चापमा परेर विशेष चौकबजारका दोकानदारहरु आ-आफ्नो दोकान खोल्न बाध्य बनेका थिए। तर दोकानमा बिक्री गर्ने सामग्रीनै नरहेपछि आज यी दोकानदारहरुले दोकान सफा गर्ने कार्य मात्रै गरे।
यसैबीच, भोलि 25 सितम्बरदेखि सिंहमारी सिण्डिकेटले पनि सिण्डिकेटका सम्पूर्ण गाड़ीहरु चलाउने निर्णय लिएको छ। सिंहमारी-दार्जीलिङबीच लगभग 80 वटा ट्याक्सी गाड़ी चल्ने गर्छन्, जुन गाड़ीहरू पनि 102 दिनदेखि पूर्णरूपले अचल छन्।